Somaliland oo heegan u ah ka hortaga in ay al-Shabaab ku soo dhex dhuuntaan
Waxaa qoray Barkhad Daahir oo Hargeysa jooga
Maarso 09, 2012
Ka dib markii ciidamada AMISOM iyo kuwa DFKM Soomaaliya ay al-Shabaab xooga kaga saaren koonfurta Soomaaliya, qaybo ka mid ah kooxaha xagjiriinta ayaa soo galay Somaliland sida ay sheegeen masuuliyiin ka mid ah deggaanku.
Ciidamada ammaanka Somaliland oo dhoolatus ku samaynaya xabsi ku yaala magaalada Hargaysa. Masuuliyiin ka tirsan ciidamada ammaanka ayaa sheegay in shacabku ka feejignaadaan kooxaha argagixisada ah ee soo galaya gobolka. [Tony Karumba/AFP]
Shaqo la’aanta dhalinyaradu waa 'mushkilad qaran' oo ka taagan Somaliland
Dhaqaalaha lacageed ay EU ku deeqday oo loogu talo-galay wanaajinta addeegyada biyaha ee Somaliland
“Waxaan rabaa inaan u sheego dadka Somaliland in nabbadii aanu ku caano maalaynay 21 sanno ee la soo dhaafay ay sababtay in aanu yeelano cadawyo iyada oo haatan weerar nalaku yahay,” ayuu yiri Madaxweyne ku-xigeenka Somaliland C/raxmaan C/laahi Ismaaciil isagoo ka hadal ka jeedinayaay xafladdii furitaanka bandhigii Filimada, Farshaxanka, Gabayada iyo Cayaaraha Hiddaha iyo Dhaqanka ee Nabbada iyo Horumarka.
“Kooxaha xagjiriinta ah ee al-Shabaab waxa uu culays baddani ka soo food saaray koonfurta Soomaaliya waxaana jira kooxo baddan oo soo galayaa magaalooyinka waawayn ee Somaliland,” ayuu yiri Ismaaciil.
Wuxuu bulshada ka dalbaday inay feejignaadaan ayna la socdaan wixii dhaq-dhaqaaq shaki keeni kara ama dadka aan la garanayn ee laga yaabo inay soo galeen Somaliland.” Ilaahay iyo dawladda ka sakow, nabbadu waxay ku jirtaa gacmaha dadwaynaha kuwaasi ka difaaci doona kuwa raba inay baabi’iyaan waddanka,” ayuu yiri madaxwyene ku-xigeenku.
Ismaaciil wuxuu sheegay in dawladda iyo shacabka Somaliland “ay dareemayaan cadaadis dheerada” oo kaga imanaaya dhibaatooyin ammaan ee soo kordhay.
“Waa inaad indhaha ku haysaan dhagihiinana furtaan, ayuu yiri madaxweyne ku-xigeenku isagoo la hadlaayay dadka muwaadiniinta ah. Madaxweyne ku-xigeenku wuxuu sheegay in dawladdu ay u sheegtay dugsiyada iyo jaamacaddaha in ay heegan ka ahaadaan wixii wajiyo cusub leh ee ay arkaan kuwaasi oo noqon kara xoogagga al-Shabaab. “Qofkasta oo ku nool magaalooyinka waawayn waa inuu fiiro gaar ah u yeeshaa aoggaadaana waxyaalaha ku hareeraysan, gaar ahaan dhalinyarada ku cusub deggaanada,” ayuu yiri madaxwyene ku-xigeenku.
Somaliland waxay heegan ku jirtay ilaa horraantii bishii February, ka dib markii al-Shabaab iyo al-Qaacida ay si buuxda ugu dhawaaqeen isbahaysigooda. Wakthi dambe oo bishaasi ka mid ah kooxda dagaalamaysa ee uu hoggaaminayo Maxamed Siciid ee uu fadhigoodu yahay Boosaaso iyo buuralayda Galgala ee Puntland ayaa si buuxda ugu dhawaaqday xiriirka ay la leeyihiin al-Shabaab.
Aamina Faarax oo ah haweenay 50 jir ah oo dukaan ku leh magaalada Hargeysa ayaa sheegtay in digitaanka ay dawladdu dadka u digayso ay xasuusinayso weeraradii dhacay October 29-keedii, 2008-kii kaasi oo lix naftood hurayaal ah oo gawaari walxaha qarxa ka soo buuxiyay ay weerar ay soo abaabuleen ku qaadeen magaalooyinka Hargeysa iyo Boosaaso iyagoo dilay ugu yaraan 30 qof. “Tani waxay i xasuusinaysaa weerarkii argagixisnimo kaasi oo aan ku waayay qof ka mid ah qaraabadaydii,” ayay Aamina ugu warantay Sabahi.
“[Hadda la joogo], waxaan rajanaynayaa haddii aanu nahay – dawladda iyo shacabka – inaanu naftayada ka difaaci doono cadawga, si aanay markale nooga dhigin kuwo silca,” ayay tiri Aamina.
Yaasiin Jaamac Calase oo casharo ka dhiga Jaamacadda Hargeygsa ayaa sheegay in soo galitaanka al-Shabaab ee Somaliland iyo middowgii ay dhawaan la middowday xoogagga Galgala khatar dheeraad ah ku yeelan karto ammaanka. Iyadoo al-Shabaab ayna awoodi doonin inay si guuli ku jirto ay dagaal iskaga caabiyaan Somaliland, kooxdu waxay isticmaali kartaa qaraxyo ay la beegsadaan si ay khalkhal u galiyaan nabbada iyo ammaanka gobolka, ayuu yiri Calase.
Wuxuu sheegay in bar-tilmaameedka ugu horreeya ee al-Shabaab inuu yahay dhalinyarada baylahsan, ee aanan shaqada haynin ama sida fudud loogu soo xero-gelin karo iyadoo la adeegsanayo magaca diinta. “ Waxay ku khiyaameeyaan dhalinyarada iyagoo u sheegaya in [ficilada argagixisanimo] inay jannada geyn doonaan,” ayuu Calse ugu waramay Sabahi. Tallaabooyinka lagaga hortagayo argagixisanimada dawladdu waa inay adkaysaa soohdimaheeda si ay uga hortagaan inay al-Shabaab soo galaan Somaliland, ayuu Calase sheegay. Dawladdu waa inay wax ka qabataa faraqa waxbarasho iyo shaqo la’aaneed ee jira, kuwaasi oo dhalinyarada baylahsan ka dhiga inay u nuglaadaan siyaasadda qoritaanka ee al-Shabaab, ayuu yiri Calase. “Waxaa jiri doonaa barnaamij shaqo abuuris oo loogu talo-galay dhalinyarada iyo waxbarashada diinta taasi oo dhalinyarada baraysa in is miidaamintu ay tahay mid dambi ah, “ ayuu yiri Calase. Wuxuu yiri dadka dhalinyarada ah waa in la daryeelaa lagaga warhayaa, gaar ahaan kuwo ku jira goobaha wax lagu barto si loo hubiyo in aanay maskaxda ka xadin argagixisadu.
Dayib Muxumed Nuur oo casharo ku saabsan maaddada xiriirka caalamiga ka bixiya Jaamacada New Generation ayaa sheegay in al-Shabaab ayna wax guul ah ka gaari doonin Somaliland inta ay dawladda iyo bulshada ka wada shaqaynayaan si nabbada loo sii ilaaliyo.
“Waa lagama maarnaan in dawladdu ay adkayso ammaanka ayna wax la wadaagto bulshada si uu midba midka kale u taageero si loo ilaaliyo nabbada , ayuu Dayib u sheegay Sabahi.
April 13, 2012 @ 03:50:30AM
Aniga hadaan nahay dadka reer Bariga Afrika waxaan saboolnimo ku sugneyn qarniyo badan. Ma haysano ilbaxnimo, waxbarasho, iyo nabbad. Wax aan haysano ma jiraan, dad walaalo ah ayaa dagaalama, Allahayow noo gargaar, xubnaha Al-shabaab waa walaalaheena. Haddii ay imaadaan guriga aan soo dhaweyno kadibna aan barno in ay si nabbad iyo deganaansho ku jirta ugu qaybqaataan nidaamka siyaasada,
March 19, 2012 @ 01:09:22AM
Hadhaaga kasoo hadhay kooxda Al-shabaab ayaa iyaga kolba soo qaadaya weeraro aan loo meel dayin oo dhankasta lagu beego, taana waxay uga gol leeyihiin inay caddeeyaan in kooxdoodu ay wali jirto, hayeeshee dhab ahaantii waa naf la caari. Ilaahay idankiisana way iska quusan doonaan. Waxa ay garawsan doonaan in ay ku sugan yihiin xaalad aad daciif u ah oo aan u suuragalin karin in ay sii wadaan weerarada ayo cadawadda ay ku hayaan shicibka Soomaaliyeed.
March 12, 2012 @ 03:08:46AM
aniga o ku nool magaalada Hargeisa, waxa jirta dhallinyaro badan oo somaliland u dhalatay oo AL-shabaab ka mid ahaa oo qaarkood ku soo nodeen dadkoodii inkalena rajeynayaan, halka qaar kale ka baahsantahay xagg ay u kacaanba.. waayo sida aan ka war qabno inta badan degaanada koonfurta somaliya waxay gacantooda hoos imanayaan maamulka TFG ee somaliya.. taas oo dhallinyarada u dhallatay waqooyiga ama Somaliland ay ku adkaan doonto inay sii joogaan maadaama xarakadii ay ku jireen baa'baiday. waxaa iga tallo ah, inan dhallinyaradeenii dalka ka baxda ee raba inay ku soo laabtaan Somaliland isku soo dhiibaan maamulka somaliland oo aysan dhuumasho ku soo gallin si xadhig lagula kicin nafahooda, sidoo kale ay cadeystaan inay fikirkaa khaldan ka baxeeen, waayo cid u diidi kartaa ma jirto inay dalkooda ku soo laabtaan haday ka hadhaan kooxdaas alshabaab ee dhabada khaldan ku jirtay ee hada firxadkaa....